Tilmaamaha Goobta ee Ku Sahaminta Baahiyaha Bulshada | Martech Zone
Sawir-gacmeedkan oo ka socda Lemonly iyo 9clouds oo bixinaya aragti ku saabsan sida loo dhex maro baraha bulshada waa wax gaar ah. Ujeeddadu waxay ahayd in sawir cad laga bixiyo si looga jawaabo saddex su’aalood oo 9clouds marwalba la helo - Shabakado noocee ah ayaan isticmaalayaa? Maxay tahay sababta aan u adeegsado Pinterest ama Google Plus ama [insert network]? Shabakadee ayaa ugu fiican ganacsigeyga?
Xogta warbaahinta bulshada waxaa ku jira tirooyinka muhiimka ah, suuqyada la bartilmaameedsanayo, dhagaystayaasha iyo waqtiga u go'an shabakad kasta. Xitaa haddii aad haysatid daqiiqado keliya, qaybtani waxay ku siin doontaa aragti guud oo ku saabsan shabakadaha iyo inay kugu habboon yihiin / u qalmaan waqtigaaga.
9 Daruuro ayaa bilaabmaya Raadinta Warbaahinta Bulshada: Tilmaamaha Goobta. Infographic wuxuu iftiiminayaa shabakadaha lagu soo bandhigi doono buugga wuxuuna ku siinayaa fiirinta qaar ka mid ah waxyaabaha buuggu ka kooban yahay.
Tags: 9coodFacebookhagaha garoonkagoogle daraygoogle +liin dhanaanLinkedInmarinka warbaahinta bulshadaPinterestwarbaahinta bulshadaTwitteryoutube
Muxuu yahay sawir-gacmeed xiiso leh oo lagu muujinayo tirooyinkaaga isticmaalka warbaahinta bulshada kasta. U tagida inay tahay inaad waxbadan ka barato hubaal.